बर्षभरि सुतेका विकासे संस्थाहरु असारे विकासको लागि ज¥याकजुरुक – Newsrara
बर्षभरि सुतेका विकासे संस्थाहरु असारे विकासको लागि ज¥याकजुरुक
न्यूज रारा June 30, 2019
कर्णाली राजमार्ग सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्ग टाल्ने काम सरु गरेको छ । राजमार्गका अधिकांश ठाउँमा अहिले पिचको नामनिसान छैन। कालोपत्र सबै उप्किएकाले राजमार्ग हिलाम्मे र धुलाम्मे भएको छ । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा असारे विकासको पर्व यस बर्ष पनि चलिरहेको छ । विकासे संस्था, उपभोक्ता समिति र प्राविधिकहलाई काम सक्न भ्याइ नभ्याइ छ । कामको गुणस्तरतिर हेर्दै नहेरी सम्बन्धित निकायले असार मसान्तभित्र जसरी पनि काम सक्नै पर्ने नेपाली संस्कार यसबर्ष पनि देखिएको छ । बर्षभरि सुतेका विकासे संस्थाहु असारे विकासको लागि ज¥याकजुरुक उठेका छन् । यस आर्थिक बर्षको पुँजीगत बजेटको अझै पनि ठुलो हिस्सा खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
समयमा रकम खर्च गर्न नसके फ्रिज भएर जाने डरले सम्बन्धित निकायलाई पिरोलिरहेकोछ । रकम फ्रिज गराउनुभन्दा आलटाल र ढाकछोपको प्रक्रिया उनीहरुले अवलम्बन गरिरहेका छन् । हतारमा काम गर्दा काममा गुणस्तर नआउने कुरामा विकास आयोजनाका सरोकारवालाहरु जानकार भएपनि यसप्रति उनीहरु मौन नै देखिन्छन् .।एकातिर असारे विकासको व्यापक विरोध भइरहनु र अर्काेतिर सम्बन्धित पक्षले बजेट सक्ने मात्र नियतले काम गरिरहँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको देखिन्छ . सही समयमा योजनाको तर्जुमा नहुनु समयमा बजेटको प्रवाह न्ुहुनु विकासे संस्था जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नसक्नु, नीतिगत कमजोरीहरु कायमै रहनु, अनुगमनको उपयुक्त संयन्त्र नहुनु आदि समस्याह अझै पनि कायमै छन् । दुई तिहाइ सहितको अधिकार सम्पन्न स्थायी सरकार हुँदा पनि विकासमा यस्तो अनियमितता र कुशासन देखिनु विडम्बना सावित भएको छ .।
सोहि सिलसिलामा सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्ग टाल्ने काम सरु गरेको छ . वर्खा लागेसंगै हिलाम्मे हुने कर्णाली राजमार्ग टाल्नका लागि विभिन्न कन्ट्रक्शनले सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लासंग सम्झौता गरि काम सरु गरेका छन् । कालिकोट जिल्लाको ताडि देखि २२ किलोमिटर सडकको विचविचमा विग्रेको सडक टाल्नका लागि जुम्लाको कठायत कन्ट्रक्शनसंग सम्झौता गरि काम सरु गरेको छ . कठायत कन्ट्रक्शनका राजुसिंह कठायतले वर्षाले साथ दिएमा १५ दिनभित्रमा बाटो मर्मत गरिसक्ने बताउनुभयो ।